Infographics: Kugadzira QR Makodhi Kuongorora | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 8, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Shamwari dzangu dzinoziva kuti ini handisi fan of QR (Kurumidza Kupindura) makodhi. Panguva yandinoona kodhi yeQR, sarudza kana ndichida kuiongorora, vhura nharembozha yangu, vhura application kuti uongorore kodhi yacho ... uye wozoiongorora - ndingadai ndakataipa kero yewebhu mukati. zvakashata… hongu, ndazvitaura!
Zvinotaridza kuti QR kodhi inogamuchirwa is zvakaoma. 58% yeavo vakaongororwa vaisaziva maQR kodhi. 25% yeavo vakaongororwa havana kana kuziva zvavakange vari! Mukuzvidzivirira kweQR kodhi, haisi yese yakaipa nyaya. Vanhu vachashandisa QR kodhi kana ivo vari kutarisira kudzikisira uye mamwe maindasitiri ari kuvashandisa kuti vanyatso kutora dhata.
Aya mashoma emimwe mienzaniso yandakaona yandaifunga kuti mashandisiro akanaka eQR Makodhi:
Pane imwe resitorendi muAtlanta, menyu yakashandisa QR kodhi kuti muverengi atarise kumusoro kwemamwe ruzivo rwehutano pamusoro pemenyu online.
Pamusangano weWebtrends, makamera akagadzwa pamusangano wega wega wemusangano kuti atore ruzivo rwevashanyi bheji. Izvi zvakatendera timu kuona kuti ndedzipi zvirongwa zvainyanyo kufarirwa.
Kutumira makoni kuburikidza neemail kune vanogamuchira. Nekudaro, mabhodhi anoshanda zvakangofanana nemakodhi eQR. Uye barcode scanner anowanikwa zvakanyanya munzvimbo dzekutengesa.
Ndeapi mashandisiro anoita awakaona kushandisa QR kodhi?
Iniwo ndinofunga tiri padanho rekushandisa scan uye yekuziva matekinoroji akanyanya kumberi kupfuura QR kodhi.
Aug 8, 2011 na6:28 PM
Ndakabhuroga nezve QR macode kumashure muna Zvita we2010 ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online ) uye heano mamwe emazano angu….
Muchitoro Facebook Senge: "Kunakidzwa nekutenga pano? 'Senge' isu paFacebook. Skena iyi QR kodhi nenharembozha yako. Iva wekutanga kuwana zvinopihwa zvakanaka uye zvideredzwa kuburikidza neFacebook peji redu. "
Muchitoro Nyora E-mail Newsletters kana SMS mameseji chenjedzo. Same idea sepamusoro. Iva nechokwadi chekupa mubairo wekunyoresa. Ita shuwa kuti QR kodhi tsamba yekumhara peji ine nharembozha.
Muchitoro chedemographic kana ruzivo rwekuongorora: "Tiudze zvishoma nezvako uye uwane emahara makuponi". Iva nepeji pfupi pfupi yekuongorora ine hushamwari peji ine yekupedzisira peji iri muchitoro kopani ravanogona kushandisa izvozvi.
Zviziviso zvakadhindwa, mabhurocha, makadhi ebhizimisi: “Wana mamwe mashoko pamusoro peizvi. Tarisa iyi QR kodhi pafoni yako." QR macode matsva, asi akawanda akadhindwa midhiya ane nguva yekutungamira yemwedzi. Taura nemutengi wako nezvezvirongwa zvavo zvekudhinda izvozvi uye mwedzi mitanhatu kubva ikozvino.
Kufunga kupfuura nyika yekutengesa. Ini nguva pfupi yadarika ndakataura nevekushambadzira uye nekuratidzira vanhu pane hombe museum. Ndakakurudzira kuti vagoisa QR kodhi mune dzimwe nzvimbo dzekuratidzira. Iyo kodhi inogona kubatanidza kune yavo Webhu peji pane chinhu charatidzwa, kana kubatanidza kune yakakodzera kunze kweWebhu sosi.